स्थलीय मौसम परिवर्तनको समाधान मंगल ग्रह बसाई सरेको छैन नेटवर्क मौसम विज्ञान
पृथ्वीमा यहाँ मानवता वातावरण मा एक ठूलो प्रभाव छ। केही विश्वास गर्छन् कि प्राकृतिक सन्तुलन बिग्रिएको छ, जुन नयाँ भौगोलिक चरणमा पुग्दछ: एन्थ्रोपोसिन। तापक्रम बढ्न जारी छ र डण्डाहरू लगातार बढिरहेको दरमा पग्लिरहेछ। यदि यो जारी रह्यो भने, समुद्री सतह यति बढ्न सक्दछ कि यसले हामीलाई नयाँ नक्शा बनाउन बाध्य पार्छ।
के हामी मंगलवार सर्न सक्दछौं? यद्यपि यो समाधान हुन सक्दछ (जुन धेरै वैज्ञानिकहरू पहिले देखि हेरिरहेका छन्), गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेन्टर (नासा) का निर्देशक गेभिन श्मिट सोच्छन् कि यो यसको लायक छैन। र त्यसैले उनले यो Huelva मा जलवायु परिवर्तन मा अन्तर्राष्ट्रिय कांग्रेस मा यो कुरा थाहा छ।
नामिका निर्देशकको रूपमा तीन बर्ष काम गरिसकेका स्मिटले भने स्पेस स्टेशनको प्रत्येक यात्रा, आपूर्ति र यस्तै यस्तैका लागि २०० र २ 200० लाख यूरोको लागत। मंगल ग्रहको लागि यात्रामा धेरै खर्च लाग्नेछ। त्यो पैसाको मात्रा हो जुन हामी दिन सक्दैनौं, कमसेकम यस क्षणको लागि। विशेषज्ञका लागि, »मंगल ग्रह बसाई शुद्ध कल्पना हो"र यसका साथै," पृथ्वी अरू ग्रहहरूको भन्दा धेरै बस्न योग्य रहनेछ। "
समस्या त्यो हो सबै देशहरुमा अनुकूलन गर्न पर्याप्त स्रोत छैन। त्यहाँ केहि छन् जससँग धेरै पैसा छ र कोहीहरु जोसँग कम छ। जबकि अघिल्लोले अगाडि बढ्नको लागि आवश्यक कदम चाल्न सक्षम हुनेछ, अन्यसँग त्यति सजिलो हुँदैन।
मौसम परिवर्तनसँग सामना गर्न श्मिटले भने आलोचनात्मक अन्तस्करण भएका सरकारहरूलाई दबाबमा राख्नै पर्छ। »त्यहाँ त्यस्तो मानिस छन् जसले जलवायु परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्छन् वा जो यसलाई सहज दृष्टिकोणबाट हेर्छन्। सबैको व्यक्तिगत बानी बदल्दै मौसम परिवर्तनको चाल परिवर्तन हुँदैन। अधिक आवश्यक छ, निर्णयहरू उच्च स्तरमा गरिन्छन्।
यदि तपाईं अधिक जान्न चाहानुहुन्छ भने क्लिक गर्नुहोस् यहाँ.
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » मौसम परिवर्तन » स्थलीय जलवायु परिवर्तनको समाधान मंगल ग्रहको बसाई को माध्यम बाट जाने छैन